Leroy Davis-Miles sentenced to 160 months in prison | Hennepin County
Hennepin County Attorney > News > Leroy Davis-Miles sentenced to 160 months in prison
Leroy Davis-Miles sentenced to 160 months in prison
Halkaan taabo (riix) si aad u aqriso maqaalka oo ku qoran Af-Soomaali
Leroy Davis-Miles was sentenced to 160 months in prison for the unintentional second-degree murder of a 75-year-old Somali elder, the Hennepin County Attorney’s Office announced Friday.
Leroy Davis-Miles waxaa lagu xukumay 160 bilood oo xarig ah.
Leroy Davis-Miles waxaa lagu xukumay 160 maalmood oo xarig ah ka dib dilkii aan abrteerka aheyn ee uu u geystay oday Somaaliyeed oo 75 jir ah, waxaa sidaa ku dhawaaqay maalintii Jimcaha Xafiiska Xeer Ilaalinta ee Degmada Hennepin.
Davis-Miles, 24, oo reer Minneapolis ah ayaa 2dii Siteembar qirtay in uu ugeystay dil aan bareer aheyn oo darajada 2aad ah. Davis-Miles waxaa markii lagu qaaday dagaal darajada 5aad ka dib markii uu feer la dhacay dhibanaha. Xafiiska Xeer Ilaalinta ee Degmada Hennepin ayaa dacwadda ku bedelay dil aan bareer aheyn oo darajada 2aad ah ka dib markii u dhibanuhu u geeriyooday dhaawaca soo gaaray.
Sida lagu xusay cabashada laga qoray dacwada, 6dii bishii nofeembar ee kal hore, 2019kii ayaa eedeysanaha iyo dhalinyaro la socotay baska dadweynaha la soo raaceen dhinaha, ka dibna uu dhinabaha weydiistay inay buuqa joojiyaan iyaga oo buuqaya. Kooxdu waxa ay colaad u qaadeen dhibanaha kuna handadeen in ay garaacayaan marka uu baska ka dego.
Markii dhibanuhu baska ka soo dagay, kooxdii dhalinyarada aheydna iyaguna way ka soo dageen baska. Wax yar ka dib, Davis-Miles ayaa u soo dhaqaaqay dhinaca dhibaha oo feerla beegsaday, sida lagu sheegay qoraalka dacwadda. Dhabar dhabar ayuu dhibanuhu u dhacay oo madaxa ku dhufsaday geeska waddo lugeedka. Lix maalmood ka dib ayuu dhibanuhu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray